Isboortiga wac: waa maxay, waxa loogu talagalay iyo muhiimadda | Ragga Stylish
Una wicitaan isboorti waxay yeelan kartaa macnayaal kaladuwan iyadoo kuxiran aagga aan joogno. Dhinac, waxay ka kooban tahay casuumaad loogu talagalay dadweynaha guud si ay uga qayb galaan dhacdo isboorti. Dhacdooyinkaan isboorti waxay daboolayaan edbiyo kala duwan sida kubbadda cagta, kubbadda koleyga, ciyaaraha guddiga iyo xitaa cayaaraha fiidiyowga. Dhanka kale, waxaan haynaa fikradda ah baaq isboorti oo ah ilaha uu tababaraha koox gaar ah u adeegsado marka la xulanayo ciyaartoy ka mid noqon doonta kooxda rasmiga ah dhacdo.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato wicitaanka isboortiga iyo muhiimadiisa.
1 Qaybaha wicitaanka isboortiga
2 Isboortiga maxaa loogu yeeraa?
3 Tusaalooyinka qaarkood
Qaybaha wicitaanka isboortiga
Waa in la tixgeliyaa in wicitaanku uu adeegsan doono tijaabooyin taxane ah oo hordhac ah oo la qaadayo muddo wakhti ah si loo cabbiro xirfadaha iyo kartida kaqeybgalayaasha si ay u awoodaan inay doortaan waxa ugu fiican dhammaan. Kaliya maahan awoodaha shaqsiyadeed in la falanqeeyo, laakiin kuwa wadajirka ah. Faa'iido maleh in ciyaartoy kubbadda cagta ahi uu shakhsi ahaan u fiicnaado oo uu sameeyo dribbles wanaagsan haddii shaqadaada kooxeed ay tahay mid lousy ah. Waxaa jira ciyaartoy sifiican u yaqaana ciyaarta kooxda oo had iyo jeer la soo waco wicitaanadooda isboorti.
Martiqaadka waa in loo sameeyaa si rasmi ah oo qoraal ah si isgaarsiinta ama ay u gaarto dhammaan kooxaha xiisaynaya howsha. Ujeeddooyinka kale ee waaweyn ee wicitaanka isboortiga, waxaa ka muuqda taas wuxuu doonayaa is dhexgalka bulshada iyo kaqeybgalka.
Waxyaabaha ku jira wicitaanka isboortiga waxaan leenahay saddex mid oo waaweyn: cinwaan, jir iyo xirid.
Madaxa waa qeybtaas oo lagu meeleeyo magacyada mas'uuliyiinta iyo hay'adda fulin doonta dhacdada isboorti. Waa inay lahaataa muuqaal rasmi ah oo shirkadeed waxaana lagu dhejiyay qaybtaan. Waa muhiim in la tilmaamo waxa la dhigayo taariikhda la soo saaray isgaarsiinta si ay ka qaybgalayaashu u ogaadaan goorta la sameeyay. Sidoo kale waa inay lahaataa taariikhda dhacdada isboorti ee gaarka ah.
Jirka wicitaanka isboortiga ayaa ah qeybta ay ku qorayaan xarfaha waaweyn. Sababta loo wacay waa in lagu sifeeyo iyo dejiso sharciyada ama qawaaniinta ay ku xiran tahay xaqiijinta dhacdada noocan ah. Sidan oo kale, waxaa la ogeysiiyey in wax walba ay ku hoos jiraan sharci la ansixiyay. Intaas ka dib, saldhigyada wicitaanku waa kuwa lagu muujiyey qodobada soo socda ayaa jiri kara: taariikhda laga bilaabayo waxqabadyada, muddada muddada isku mid ah, booska lagu fulinayo, shuruudaha looga baahan yahay in lagu buuxiyo diiwaangelinta, tirada kartida ku lug leh.
Qaar ka mid ah isgaarsiinta la xiriirta ogeysiisyada isboortiga ayaa xiran iyadoo la magacaabayo qabanqaabiyaasha iyo mas'uuliyiinta kale ee ku lug leh munaasabadda markale. Ugu dambeyntii, gabagabadu waa inay lahaato saxiixyadooda iyo casuumaad kama dambays ah.
Qaab dhismeedka aasaasiga ahi wuxuu noqon lahaa sidan soo socota:
Goobta iyo bilawga taariikhda
Anshaxa qaybta Sport
Diiwaangelinta iyo kharashka, haddii ay jiraan
Tijaabooyin horay loo qaadi doono
Dharka iyo dharka la xidho
Garsoorayaasha, garqaadayaasha iyo mas'uuliyiinta kale ee ku lugta leh
Shuruucda iyo qawaaniinta ay tahay in la ixtiraamo inta ay socoto munaasabadda. Xaaladaha qaarkood, ciqaabta u dhiganta sidoo kale waa la dhigi karaa, haddii mid ka mid ah sharciyada ay ku lug leeyihiin.
Abaalmarino, haddii ay jiraan
Isboortiga maxaa loogu yeeraa?
Waxaan soo sheegnay inay tahay qaab loo adeegsado in lagu casuumo dadweynaha iyo inta kale ee kaqeybgalayaasha inay ku tartamaan anshax gaar ah. Ujeeddada edbintu waa in lagu cabbiro awoodaha dhammaan tirtiridda iyo wareegyada xulashada kahor. Ugu dambeyntiina, waad qeexi kartaa kooxda loo adeegsan doono inay kula tartanto kooxaha kale horyaalada ama kulamada rasmiga ah ee rasmiga ah.
Qaar ka mid ah ururada ayaa qaaday tallaabada Abuur wicitaano isboorti si loo mideeyo bulshooyinka jimicsi ka mid noqoshada bulshada. Waxaa jira wicitaano qaar oo qayb ka ah barnaamijyada doonaya inay hagaajiyaan hal-abuurka, isku xirnaanta iyo qoto-dheerida xiriirka ka dhexeeya xubnaha ka soo qayb gala dhacdooyinkan Dhaqdhaqaaqa isboorti badanaa wuxuu fududeeyaa xiriirka iyo xiriirka ka dhexeeya dadka iyo kooxaha.
Waxaa jira mashaariic badan oo bulshada iyo isboortiga ah oo hadda socda markii ugu horreysay oo lagu bilaabay wicitaan isboorti. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ahayd in lagu lafaguro barnaamijyada isboortiga iyo barnaamijyada dhaqameed ee horay u jiray si loo qeexo kuwa waqtiga sii jiraya Qaar ka mid ah barnaamijyadan waa sida soo socota:
Kaabsal Rugby: waxay raadineysaa hirgelinta anshax ee dadweynaha iyada oo loo adeegsanayo barashada muhiimada wada shaqeynta. Waxay sidoo kale isku dayeysaa in la baro isku-dubbaridka u dhexeeya xubnaha kooxda iyo sida gaarka ah ee ay u tahay in la is aamino. Waxaa loogu talagalay badanaa carruurta iyo dhalinyarada, in kastoo ay jiraan kooxo waaweyn.
Kooxaha kubbadda cagta ee dabagal: habkan, kaqeybgalka tartamada iyo cayaaraha waxaa lagu gaaraa haweenka wadajirka ah. La socoshada xiriirada dhaca inta hawshu socoto sidoo kale waa la raadsan doonaa.
Tartan Xarago: Waxaa lagu qabtaa magaalada Barcelona ujeedkeeda ugu weyna waa in lagu baro kubbadda koleyga isboorti. Thanks to noocan ah tartamada waxaad u adeegsan kartaa ku dhaqanka dhaq dhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ciyaartoy waa weyn oo awood u leh inay ka qeyb galaan tartanka. Halkani waa halka ay ku baahin karaan xirfadihii ay barteen intii tababarku socday.
Tusaalooyinka qaar ee ogeysiisyada isboortiga waxaa loo qaabeeyey sida soo socota:
Magaca machadka iyo qaybaha kale ee maamulka ee ka kooban.
Nooca wicitaanka ee la sameeyo.
Jirka: waa kan waaxda qabanqaabisa dhacdada isboorti iyo cidda loo diro.
Saldhigyada: taariikhda iyo goobta wicitaanka iyo anshaxa iyo qaybta la fulinayo ayaa la dhigayaa.
Diiwaangelinta iyo macluumaadka kale: Wicitaanada qaar, soo bandhigida dukumiinti aqoonsi shaqsiyeed ayaa laga codsanayaa in si rasmi ah looga dhigo sharraxaadda
Qeybaha kale: qawaaniinta urta badan ayaa lagu qeexaa kadib markay cadeeyaan qoraalka iyo kharashyada kale.
Xidhitaanka: isgaarsiinta waxaa lagu soo bandhigi doonaa xiritaanka oo ka kooban sawirrada shirkadaha hay'ad ama waax kasta oo qayb ka ah wicitaanka.
Macluumaadka xiriirka: Lambarada taleefanada, bogagga ama emaylka waa in la dhigaa si loo xalliyo shakiga. Waxaa jiray xoogaa faallooyin ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dhacdada isboorti iyo astaamaha ugu waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Wicitaanka isboortiga
Waxyaabaha timaha lagu rujiyo